China Ngwa Of igwe anaghị agba nchara ịme ọpịpị Manufacture na Factory | Daren
Igwe anaghị agba nchara eriri agbatị (dibbling) nwere ike iji mee ụlọ na n'èzí. Dabere na ebe eji ya eme ihe, enwere ike ịgbanye ya n'ike ma nwee ike iji aka ya tinye ya ngwa ngwa. Mgbochi ịka nká, mgbochi corrosion, ultraviolet ray, tightness. Nkọwa zuru ezu.
Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji telekomunikashions, ike eletriki, mmanụ ala, chemical, ụgbọ mmiri, àkwà mmiri, ike ọdụ, ike ngwá, n'ibu akụrụngwa, akwụkwọ igwe, ọkụ nchebe na ndị ọzọ pipeline adịgide adịgide na idozi, ma ọ bụ ndị ọzọ na ebe na mkpa ka agbụ na ofu.
Igwe anaghị agba nchara strapping / igwe anaghị agba nchara eriri tie / igwe anaghị agba nchara taping na-ekewa n'ime obodo siri ike na ọnọdụ dị nro. Karịsịa mepụta usoro 201 na 304, nke gafere ụkpụrụ GBT.
1. Ọ dịghị mfe nchara, ike mgbatị dị elu, ike na-eguzogide corrosion;
2. Agba dị ọcha, mee ka ngwugwu mara mma;
3. Mgbochi ịka nká, ogologo oge were;
4. Ọ nwere ike ijigide arụmọrụ dị mma n'okpuru ọnọdụ siri ike.
Oke nke iji:
Ọ kachasị mma maka nkwakọ ngwaahịa injinia dị iche iche, okporo osisi, mmiri, ụlọ ọrụ ike, ọdụ ụgbọ mmiri, akwa, akụrụngwa, wdg, yana dabara adaba maka igwe anaghị agba nchara na akụkụ akụrụngwa.
Etu ị ga - esi jiri rọba igwe anaghị agba nchara:
1. Wepu ngwụcha teepu ahụ 2-3CM dị nso na ala nke eriri ahụ;
2. Nyefee teepu ahụ gburugburu ihe dị mkpa ka agbụ ya wee gafee eriri;
3. Gafere teepu ahụ site na mma nke eriri igwe na-eme ka eriri ahụ na akụkụ ịpị, ma mee ka ọnụ eriri ahụ sie ike n'otu oge;
4. Jide eriri ahụ ma gbanwee aka ahụ iji mee ka agbatị ahụ sie ike;
5. Mgbe emechaa, gbagoo teepu ahụ na teepu na-eme ka igwe na-agbatị elu karịa 90 degrees iji gbochie eriri teepu ịdọghachi azụ.
Usoro nchekwa nke igwe anaghị agba nchara:
1. Mgbe ị na-echekwa teepu nchara igwe anaghị agba plastik, onye na-ebufe ya kwesịrị iyi uwe ndị ọkachamara iji hụ na elu ahụ dị ọcha. N'otu oge ahụ, iji zere ncha elu, ọ kachasị mma iji eriri igwe anaghị agba nchara iji kpuchido akụrụngwa ahụ.
2. Mgbe ị na-echekwa, ịkwesịrị ị attentiona ntị na gburugburu ebe obibi, dịka iwepu mmiri, uzuzu, mmanụ, mmanụ na-ete mmanụ na ihe ndị ọzọ dị ka o kwere mee, ma ọ bụghị na ọ ga-eme ka nchara dị n'elu, ma ọ bụ nkwụsi ike nke ịgbado ọkụ na-ekpo ọkụ.
3. Mgbe a na-emikpu mmiri n’etiti ihe nkiri ahụ na plastik-awụsara igwe anaghị agba nchara teepu, ọnụọgụ corrosion ga-adị ngwa ngwa karịa mgbe enweghị ihe nkiri. Na-echekwa ebe dị ọcha, akọrọ na ventilated. Debe ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa mbụ. Zere ìhè kpọmkwem na teepu igwe anaghị agba nchara. Ekwesịrị ịlele ihe nkiri oge ụfọdụ. Ọ bụrụ na ihe nkiri ahụ na-akawanye njọ (ndụ ihe nkiri: ọnwa isii), ọ ga-anọchi ozugbo, ọ bụrụ na a na-etinye ngwugwu ngwugwu mgbe ị na-agbakwunye pad ahụ, a ga-ewepụ mpe mpe ahụ ozugbo iji gbochie nsị elu.